कैदीबन्दीको सङ्ख्या बढ्दै ,साँघुरो भएपछि भरतपुर कारागार सार्न ठाउँ खोजिँदै – Saurahaonline.com
कैदीबन्दीको सङ्ख्या बढ्दै ,साँघुरो भएपछि भरतपुर कारागार सार्न ठाउँ खोजिँदै
सौराहा अनलाइन | २०७६, ३१ बैशाख मंगलवार
चितवन, ३१ बैशाख । जिल्ला कारागार भरतपुर रहेको ठाउँ साँघुरो भएपछि स्थानान्तरण गरिने भएको छ । सोका लागि जग्गा खोजीकार्य अघि बढाइएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार कैदीबन्दीको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि फराकिलो ठाउँमा एक हजार क्षमताको कारागार निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
हाल कारागारको क्षमता २८० भए पनि अहिले ७३० कैदीबन्दी छन् । बस्नेतले चाररपाँच बिघा जमीन खोजी भइरहेको बताए । हाल कारागार रहेको ठाउँमा एक बिघा १३ कठ्ठा जमीन रहेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर जग्गाको खोजीकार्य भइरहेको उहाँले बताए । अस्पताल, अदालत, प्रशासन र सरकारी वकिलको कार्यालय आवतजावत गर्नुपर्ने भएकाले भरतपुरको शहरी क्षेत्रमा नै जग्गाको खोजी भइरहेको उनले बताए । टाढा कारागार हुँदा खर्चिलो र व्यवस्थापनमा कठिन हुने भएकाले शहरी क्षेत्रमा नै जग्गा खोजी गरिएको उनले बताए ।
जग्गाको पहिचानपछि कारागार भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको भन्दै उनले जग्गा खोजीको कामलाई तीव्रता दिइएको बताए । चालू आर्थिक वर्षमा जग्गाको पहिचान गरी आउँदा आर्थिक वर्षमा निर्माणको तयारी गरिएको छ । कारागारमा धेरै गैँडासम्बन्धी मुद्दाका कैदीबन्दी छन् भने अन्य जिल्लामा रहेका बिरामी कैदीबन्दीको रोजाइ पनि चितवन हुने हुँदा यो संख्या बढ्दो छ ।
यससँगै पूर्वी नवलपरासीमा जिल्ला अदालत भए पनि कारगार नभएकाले त्यसको दवाब यहाँको कारागारले थेग्नुपरेको कारागार प्रमुख कमलप्रसाद काफ्लेले बताए । यहाँको कारागारमा नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्तापूर्व० जिल्ला तथा मकवानपुरबाट समेत कैदीबन्दी ल्याइने गरेको छ ।
विसं २०७५ भदौ ३ गते पूर्वी नवलपरासीमा जिल्ला अदालत स्थापना भएपछि त्यहाँबाट यहाँ १५३ कैदीबन्दी ल्याएर राखिएको छ । जिल्लामा कैदीबन्दीको चाप बढी भएपछि यहाँबाट समेत देशका अन्य कारागारमा कैदीबन्दी पठाउने गरिएको काफ्लेले बताए । रासस
पर्यटन मन्त्री योगेशले चितवनमा भने :सम्मानजनक सहभागिताले पार्टीमा विभाजन हुन दिदैन् २०७७, १४ मंसिर आईतवार
एसएसपी सिंह आक्रामक बन्दै, गुन्डा नाइके चक्रे मिलनको बिच सडकमै खानतलासी २०७७, १४ मंसिर आईतवार
संरक्षणकर्मीलाई घडियाल संरक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण २०७७, १४ मंसिर आईतवार
कहाँ छिन्, प्रेम नपाएपछि बलात्कार आरोप लगाउने कृष्णदास सिद्धबाबाकी रामदासी ? २०७७, १४ मंसिर आईतवार
कुमारी बैंकद्धारा मृतक धामीको परिवारलाई आर्थिक सहयोग (भिडियो) २०७७, १४ मंसिर आईतवार
एसओएसद्धारा विपन्नलाई जीविकोपार्जन कार्यक्रम अन्तर्गत ३५ लाख २०७७, १४ मंसिर आईतवार
पर्यटन मन्त्री योगेशले चितवनमा भने :सम्मानजनक सहभागिताले पार्टीमा विभाजन हुन दिदैन्
चितवनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता एबं संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईले.....
एसएसपी सिंह आक्रामक बन्दै, गुन्डा नाइके चक्रे मिलनको बिच सडकमै खानतलासी
संरक्षणकर्मीलाई घडियाल संरक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण
कहाँ छिन्, प्रेम नपाएपछि बलात्कार आरोप लगाउने कृष्णदास सिद्धबाबाकी रामदासी ?
कुमारी बैंकद्धारा मृतक धामीको परिवारलाई आर्थिक सहयोग (भिडियो)
एसओएसद्धारा विपन्नलाई जीविकोपार्जन कार्यक्रम अन्तर्गत ३५ लाख
रत्ननगरका मेलमिलापकर्तालाई कानुनी साक्षरता सम्बन्धी प्रशिक्षण
२४ घण्टामा २५ कोरोना संक्रमितको मृत्यु, १,२५५ संक्रमित थपिए
मध्यवर्ती क्षेत्र र सांगठनिक संरचना !
सेयर बजारमा फेरी अर्को रेकर्ड, कारोबार अहिलेसम्कै उच्च